lundi, 29 mars 2021 18:58
Asa fanaovan-gazety : Ratsiraka no nanao ny censure, dia izy indray no ankalazaina fa demokraty nanafoana ny censure
Fitondrana nampihorohoro ny fitondrana Ratsiraka tamin'izany ho an'izay tsy nitovy hevitra politika taminy. Niasa ny DGID na ny service de renseignement tao Ambohibao, ary maro ireo nigadra tamin'izany. Nihetraketraka ireo zanany sasany tamin'izany. Xavier Ratsiraka anisan'ny voafelaka tehamaina tany Toliara, faha 13 taonany fa nanambana basy kalaky. Izahay no niady hisian'ny fahalalahana manao politika, fanafoanana ny censure, ny fisian'ny fifidianana malalaka, ary nametrahana ny mpanara-maso ny fifidianana tamin'izany, ka nanaovana ny lalàna 90-001 mifehy ny antoko politika sy ny fanaovana politika teto Madagasikara.
lundi, 29 mars 2021 10:15
29 martsa 2021 : Tsiaro ny Tolom-panafahana 1947 sady fanaovam-beloma farany ny Amiraly Didier Ratsiraka
29 martsa 1947 - 29 martsa 2021, feno 74 taona anio ny Tolom-panafahana nanaovan’ny Malagasy vy very aina hanilihana ny mpanjanatany, hisian’ny fahafahana sy hiverenan’ny fahaleveontenam-pirenena. Roa taona nisesy izao, noho ny valanaretina coronavirus. Ho an’ity taona ity, dia teo koa ny fahafatesan’ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka, nitondra an’i Madagasikara nandritra ny 21 taona teo anelanelan’ny 4 janoary 1976 – 27 martsa 1993 nitohy ny 9 febroary 1997 – 6 mey 2002. Andro manokana ny 29 martsa 2021 ho an’i Madagasikara, andro fisaonam-pirenena, hanaovana veloma farany ny Amiraly Didier Ratsiraka. Hapetraka ao amin’ny fasan’ny Mahery fo na Mausolée Avaratr’Ambohintsaina – Antananarivo izy anio.
samedi, 27 mars 2021 20:00
Fahatsiarovana ny tolom-panafahana : Nosantarina tamin’ny fotoam-pivavahana teny amin'ny Advantista Soamanandrariny
ny Fotoam-pivavahana notontosaina teny amin'ny Fiangonana Advantista Soamanandrariny, androany sabotsy 27 Martsa, nitrotroana am-bavaka ny firenena no nanokafana ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 29 Martsa 1947. Tonga nanotrona izany ireo mambra ny governemanta vitsivitsy sy ny avy ao amin'ny fitaleavan'ny mpiady tia tanindrazana. Ity farany izay mpandrindra sy mpikarakara ireo bekotro eo anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Tara-kevitra novoizina tamin'ity taona ity ny hoe "Fitiavan-tanindrazana tsy maty ao am-po lovainjafy".